Indonesia in Focus: Ma rabtaa in ay tagaan samada, u baahan tahay fure?
Ma rabtaa in ay tagaan samada, u baahan tahay fure?
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (334)
(Qaybta saddex boqol iyo soddon iyo afar), Depok, West Java, Indonesia, August 5, 2015, 18:23 pm).
Qof kasta oo Banii'aadan ah waa in doonayaan in ay tagaan samada, meeshii Ilaah waxa uu ina siiyay kuwa rumeeyey.
Si aad u furato albaabbadii samadana wuu dabcan waxaan u baahan nahay furaha, oo fure u ah janno waa aqoonsi ah oo ka mid ah Unity Ilaah, Laillahaillaulah (ma jiro mid istaahila in la caabudo Eebe mooyee), oo wanaag kula rafiiqo aqoonsiga Muhammadarasulaulah (Nabiga Muxammad waa Rasuulkii Eebe). Aqoonsiga Tawxiidku tani waa waxa ugu muhiimsan oo ka mid ah shanta tiir ee Islaamka.
Qufulka kasta wuxuu u baahan yahay serrations, si ay ugu sahlanaato inay ka gala irridaha samada, samada pentu serration waa aynu nahay daacad ah oo joogto ah oo isku halleeyaa fuliso shan tiir oo Islam, horta waxaad ku tidhaahdaan Laillahaillaulah Muhammadarasulaulah (Waxaa Eebe waa kan wuxuu xaq u leeyahay in la caabudo Eebe mooyee, iyo Muxammad waa Rasuulkii Eebe) ,
Marka labaad, fuliyaan salaadda ee qasabka ah, Soon lagu jiro bisha Ramadaan labaad, sako mushaharka saddexaad, afraad ee ka tagaan Xajka in Mecca, Saudi Arabia, haddii ay suurtogal tahay.
Intaa waxaa dheer, innagu waxaynu nahay badan oo samafal oo u sujuudo sidii uu amarkii Eebe ee Al Quraanka iyo Xadiiska (Sunnah / al-xigmad) sida ku dhaqma Muhammad Nabiga oo isaga saaxiibbadiis ah, oo aan ku caabudaan hab kale oo iyaga ka badan.
Haddii aan ku caabudaan hab kale oo aan ahayn in uu tusaale Muhammad Nabiga iyo saaxiibbadiis oo waannu tegi doonnaa baadi iyo dhici karta bidcinimo firqah kale mngikuti sida socodka shiicada, khawarij, murjiah, sufiyah iyo firqah kale la maleegey.
Socodka gaarka ah ee Shiicada, golaha culumada ee Indonesia (MUI) tan iyo guddoomiyihiisa Prof. dijabat Hamka fatwa, socodka waa nidaam ah Shi'ite, waxaa jira toban sababaha MUI guraan dhaxaltooyo Shiites, kuwaas oo ay mengkafirkan Asaxaabtii Nabi Muxammed, caqiido waa lid ku ah Quraanka iyo Xadiiska.
Jad lagama helin farcamaan kooxo kale ee Muslimiinta ah iyadoo la raacayo asaxaabta Ahl Sunnah wal jamaacadda marka laga reebo ka mid ah kuwa raacsan ee As-Salaf al-Saalax AlMunajjid Ahlul.
Sidoo kale eeg Khumeyni (oo afgembiyey / afgambi Raja Reza Pahlavi) weyn oo iyaga ka -tokoh in marxalad this- cambaareeyey habaaray Abu Bakr iyo Cumar in uu buugga Kasyful Asroor kiiska, 131, waxa uu sheegay, Runtii syaikhani (Abu Bakr iyo Cumar) ... iyo Halkan ka si aynu wax lagu qasbay in ay soo gudbiyaan caddaymo in wixii khaldama ay labada kuwo aad u cad oo ku saabsan Quraanka si ay u caddeeyaan in labada lahaa menyelisihinya.
Oo waxay ku yidhaahdeen marka la eego mar kale of 137: ... iyo Nabiga indhaha (d) la xidhay halka labada dhegihiisa ma bilaa micne Ibn Khattab ka sarreeya Wadda ka yimaadaa dhaqanka ee Khiyaano iyo gaalnimo, kezindikan iyo penyelisihan Aayaadkiisa ee Aayado ah ' sharaf daahay.
Weynaanta Tawxiidku, Delete dembi oo dhan
Ustadz karin niqaabka wejiga Faiz Asifuddin
Waa maxay qarsoon oo weynaanta tawxiid, si ay u soo saarto, dembiyadayadii oo dhan, wax alla wixii? A anhu Cumar bin Khadhaab Radi tusaale ahaan, qof ka hor inta aanad gelin Islam ugu caansan ka hor imaanayaa tacliimaadka Islaamka oo la og yahay iyada u daran Gaalnimada iyo lagu aasay nool. Laakiin Islaamka, cibaadada mentauhidkan oo kaliya in ay Alle Subhanahu wa Jannatul oo keliya, markaas terhapuslah dembi oo dhan iyo xadgudubka sii kordhaya. Xitaa tirada ugu sharaf in kooxda ka dib markii anhu Abu Bakr Radi Eebe.
Waxaa intaa dheer, haddii mid ka mid ah oo yar yar ayaa qalad, waxaa lagu dheeraad ah si fudud looga saari lahaa tawxiid. Xitaa haddii khaladaad ah iyo sidoo kale kufr ka weyn tahay Umar Radi anhu inkastoo, dhawraan waxaa ka mid ah waa laga tirtirayaa iyo baaba'aan la tawxiid.
Nabiga sallallaahu 'wa sheegay, in Alle Subhanahu wa imtithaal:
Alle ayaa yidhi: "... Ruuxii ku igu la kulmay Cilad dhan-dhulka ee gobolka wadaajin waxba ila, ka dibna waxaan isaga wada aragno doonaa dambi dhaaf in ay ka buuxaan dhulka". [HR. Muslim] .
In sunankiisa Tirmidi ka Anas Radi anhu, waxa uu sheegay in Nabiga sallallaahu 'wa sheegay, Tabaraka Eebe wa imtithaal:
O ina Adam! Hubaal, haddii aad ii yimid oo leh unu dhan-dhulka, kadibna aad ii yimid ee gobolka wadaajin waxba ii leh, markaasaan kuu iman doonaa in isaga la ampunah dhan-dhulka ayaa sidoo kale .
Shaikh Abdur Rahman bin Hasan helaya ash-Shaikh (th d, 1285 H) ku sheegay in rahimahullah al-Haafiz Ibn Rajab al-Hanbali yiri, "ruuxii u yimaadda keeno tawhid (Eebe), inkasta oo uu leeyahay Cilad dhan-dhulka, Eebe doono la kulmo dhaaf buuxa ee dhulka sidoo kale "
Taasi waa, xadiiska kor ku xusan waxay xaqiijinaysaa in qof kasta oo si fiican u tauhid, waxay heli karaan dembidhaaf In kastoo ay dembiyadiinnu kuwii dhulka ka buuxsama. Iyagoo keliya ma aha in, Nabiga sallallaahu 'wa ayaa sidoo kale caddeeyay in qofka tauhidi kaamilsan, oo aan diadzab doono Eebe aakhiro.
In xadiis Mu'adh bin Jabal anhu Radi ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka addoonkii Eebe Subhanahu wa Jannatul, Nabiga sallallaahu 'wa a ayaa yiri:
Xuquuqda Eebe waxaa waajib ku ah oo ahaa addoommadii waa in ay Caabudno Eebe Kaliya, oo aan waxba (shirk) in Eebe la wadaajin. Iyadoo xuquuqda addoonkii in la helay ka Eebana waa inaan Eebe mengadzab doonaa cid kasta oo aanu la wadaajin (shirk) wax Eebe. "I (Mu'adh) ayaa sheegay, 'O Rasuulka Alle, ayaan waxaan gaadhsiin warka wanaagsan in dadka?" Waxa uu ayaa ku jawaabay, "Ma waxaad ku aanan ku wacdiyin iyaga, waayo, waxay ku xirnaan doontaa (by leh: muhiim kama warwareego-qalinka) [HR. Bukhaari iyo Muslim] 
Saalax AlMunajjid waxa uu muujinayaa, dadka ma uu shirk ku caabudo Eebe Subhanahu wa Jannatul, isagu ma ahaan doono cadaab.
Nabiga sallallaahu 'wa sidoo kale yiri:
Yaa yiri: waxaan ka marag furaa in uu jiro Ilaah kalana ma jiro Eebe mooyee agtiisaana ah diibadahi saxda ah, waxaa jira Wadaagana ma jiro, isagaana u, iyo in Muxammad yahay addoonkiisa iyo Rasuulkiisa, ayaa sidoo kale u marag furay in Ciise yahay addoon Eebe, iyo ina addoon ah (haweenka) Eebe, inuu yahay aadanuhu ay ku abuuray xukumay, ka dibna la geliyo is-Maryam, oo isagu waa naf abuuray Eebe. Sidoo kale u marag furay in jannadu waa run, oo nerakapun run, markaas hubaal Eebe waa inuu ku shubaa doonaa samada, iyada oo albaabka meel kasta uu doonayo inuu ka tago siddeedii albaabada. (In Sheeko kale, markaas Eebe hubaal waa inuu ku shubaa doonaa samada, siday falimahoodu uu sameeyo). [HR. Bukhaari iyo Muslim] 
Waxaa weli jira qoraalo badan oo kale in ay u sheegto weynaanta tawxiid. Waa maxay sir ah?
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wax u baahan in dib loo eego waxaa ka mid ah:
Tawhid la gujinaya Esakan Eebe Ilaaha Qaadirka ah si uun ku siin caabuda oo keliya in.  Taas macnaheedu waxa weeye, in cibaadada (cibaadada) oo kaliya in Alle oo keliya oo aan waxba isaga la wadaajin (kama warwareego Xagiisa) , Waxa uu caabudno inay Eebe Ilaaha Qaadirka ah u daadinno, jacayl, saas faleynin, rajo iyo welwel. 
Rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Saalax al-Uthaymeen in erayga tawxiid waa mashdar ee wahhada, yuwahhidu, waxay ka dhigan tahay wax samaynta galay calaacalaha. Markaasaa waxaa taas ma dhici doona haddii darsanka u dhexeeya nafi (Halaag) iyo ithbat (go'aan). Burineyso (caabudo) ee aan ka ahayn in Esakan, waxana aad u xilsaartaa (cibaadada) oo keliya in Esakan. 
Iyadoo rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yiri, "Tauhid oo keeni jiray Rasuulka Eebe jirin wax baridda kale ku jira go'aanka Uluhiyyah in nooca (istaahila cibaadada) iska leh oo keliya in Alle oo keliya. Taasi waa, Rahaamad ma jiro mid ilaaha saxda ah marka laga reebo diibadahi wa Eebe Azza Jalla, qofna diibadahi waa in isaga mooyee, ma dabeecad daranyihiin istiqaalad laakiin kaliya isaga, jacaylka kuma laha ibliis wax isaga u jirto, waxyaalahan laguma samayn marka laga reebo in uu cadaawad iyo ma samaysay waxyaalo marka laga reebo wax isaga ka farxiya. Oo dhan waxay ku lug leedahay la tilmaamayo magacyada iyo sifooyinka isaga iyo sidii ay waxa uu isku tetapkannya ayuu naftiisa u ". 
Markaasuu rahimahullah yiri, "Ma aha keliya su'aasha ah Tawxiidku Tawxiidku ee Lordship. Taasi micnaheedu waa in ay aaminsan yihiin in Eebana waa abuuraha caalamka waa mid ka mid ah oo keliya". 
Taasi waxay ahayd nuxurka tawxiid taas oo ah jiritaan ee wacdinta iyo waxbarista Rasuul kasta oo Eebe, in taas oo ka kooban laba dhibcood oo muhiim ah: First, ee diidmada Ilaah wax Eebe mooyee, iyo labaad, in go'aanka ah Ilaaha runta ah waa uun Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo keliya.
Waxaan la dirray Rasuul in bulshada kasta si ay dadka walba, "waxaad caabudaysaan Eebe ku boorinayaa oo keliya, iyo sanamada Xun. [An-Nahl / 16: 36]
Oo saamigii ah hadalka Alle tallaabadaas sadarkaan.
Schilling UJEEDO Aadanaha
Ma aad u arinku iyo maqaar saar haddii dadka si kibir ah in nolosha waxaa kaliya loogu talagalay ujeeddada dunida, in la dhiso dunida oo dhan xogta muhiimka ah iyo sidoo kale technology, iyo inuu sii adkeeyo wanaag, walise kaliya ee daryeelka wanaagsan oo dunida.
Dadka ku nool hubaal wuu dhiman doonaa, oo dunida ka tago nolosha kale. Oo sida xaqiiqada ah waxaa jiri doona xisaabtanka nolosha kale. Sidaa darteed Eebe Subhanahu wa Jannatul sharaxayaa, in nolosha leeyahay ujeeddo weyn oo ma aha oo kaliya nool, ka dibna dhintay, ka dibna ku dhameysatay. Ujeedada ugu weyn tahay cibaadada Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Kalimooyinka:
Waxaan umaanaan abuurin Jinni iyo Insiba leh, marka laga reebo in ay Me adeegaan. [Adh-Dzariyât / 51: 56]
Caabudina waxaa loogu tala galay waa cibaadada daahir ah oo aan ku nijaaseeyeen cibaadada si ay ahayn Ilaahay. Haddii qof diinta u hibeyn shirk, shirkigu xayawaanka la Eebe, Eebana Subhanahu wa Jannatul cadhoon doonaa, oo ma noqon doonto ahaanshaha. 
Waxaa ka mid ah dood ay waa, hadalka Eebe Subhanahu wa Jannatul:
Dhab ahaan yaa Eebe dembiga shirk (mempersukutukan) Eebe waxaa u cafiyi doono, oo wuxuuna u dambi dhaafi dembaabo, intii warwareego cidduu doono oo kale. Qof kasta oo la Wadaajin Eebe, Eebe, oo uu qabtay dembi ah aad u weyn. [An-Nisa '/ 4: 48]
Illeen (dembiga) shirk (shirkigu Eebe), sida runta ah waa dulmi weyn. [Luqman / 31: 13]
Sidoo kale eraygiisii,
Dhab Masaajidda Eebaa, sidaas waxba ma waydiisanayaan, waa in qof kasta, marka lagu daro Eebe. [Al-Jin / 72: 18]
Sidaas, sida Alle ma noqon karo cadhooday haddii uu yahay Ilaaha Qaadirka ah si kaamil ah oo isbahaysi la Caalamka ahaayeen daciif ah oo liidata Diinna. Sidaa darteed, ka Reebban ugu weyn ee Islaamku waa shirk. Alle wuxuu leeyahay,
Oo isaga ku caabuda Eebe hana isaga la wadaajin waxba [An-Nisa / 4: 36]
Sidoo kale, muujinta ujeeddada buugaagta Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo soo socda ee rasuulladii waa aadanaha si ay u caabudno inay Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo keliya  caddayn waa mid aad u badan, oo iyaga ku dhex hadalka Eebe Subhanahu wa Jannatul.:
Oo annagu waannu ma aad hor diray rasulpun ah laakiin waxaan muujin isaga, "Bal eeg, Ilaah kale ma jiro (Xaqa) laakiin waxaan, sidaas darteed waxaad caabuddaan waxaan oo dhan waa". [Al-Anbiya '/ 21: 25]
Waa hagaag, si dadka aan niyad dambe ee nolosha adduunka kale, waa in uu hoos xeerarka ku xusan by abuura. Oo waxaa abuura waxa uu magacaabay Ergayga isaga isku halleeya inay Fariintiisa samatabbixiyo. Isagu waa Rasuulkii Eebe iyo Rasuulkiisa.
SIDA LOO tauhid?
Waxaa hubaal ah in Islaamka la dul dhisay aasaaskii ee tawxiid  Allah Subhanahu wa imtithaal.:
Waxaad dhahdaa (Nabiyow), "Runtii waxa lay Waxyooday Aniga in Ilaaheennu Ilaah kaliya yahay mid ka mid ah Ilaaha runta ah, sidaas baad haysaan ee (dhiibin) Islam xaggiisaana"? [Al-Anbiya '/ 21: 108]
Oo sidaas daraaddeed mid ayaa run Islaamka oo la aqbali karo in Eebe agtiisa ku ah Ilaaha Qaadirka ah, waa in si sax ah tauhid, sida kaliya caabuda Eebe Ilaaha Qaadirka ah la daacadda iyo ma siin yar oo ka mid ah noocyada kala duwan ee cibaadada in Eebe ka soo Subhanahu wa Jannatul. Ma tukanayay oo baryay in aan ka ahayn Allah Subhanahu wa Jannatul, wax kaliya noqday awood Eebe in la siiyo; kama oga, malaa'igaha, ma Nabiga, ma duqa magaalada, aan ahayn 'dad caqli badan, ma dhirta, dhagaxyada, qorraxda, iyo dayaxa, iyo kuwa kale oo Qubuuraha. 
Sidaas tauhid, dadka waa in ay iska caabin ah oo ka dhuunto wax kasta oo la caabudo oo ka soo hadhay Eebe Ilaaha Qaadirka ah, oo aqoonsanahay, la dhiso iyo ordi caabudaysaan Eebe kaliya waa koorsada saxda ah, iyo Abuuraha reer binu caalamka.
Tauhid ma ahan oo keliya balan qaaday in Eebana waa abuuraha kaliya, wuxuu nooleyn wixii nasiib wacan, tababare iyo milkiilaha caalamka oo dhan. Sababta oo ah noocan oo kale ah ayaa qirashadeeda tawxiid sidoo kale ay la cimrisiiyo Arab waqtiga Nabiga sallallaahu 'wa. , laakiin waxaa la ogaaday tauhid oo siinaya caabuda oo keliya in Eebe Ilaaha Qaadirka ah, codsi, salaadda iyo hawlaha kale ee uu u gudbiyo isku mid ah, oo kaliya in ay Eebe kaliya.
Sidaas darteed, si ay u shaqeeyaan tawxiid saarto dembi oo dhan oo uu joojiyo tago cadaabta, ka dibna mid ka mid ah waa in ay u Daahirina tauhidi Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo u doondoonaya inay hagaajiyo. Wuxuu waa inay fuliyaan shuruudaha ka mid ah tawxiid, sidoo kale beerka, iyo sidoo kale xubno ka mid ah uu carrabkiisa. Ama -minimal- la wadnaha iyo carrabka waqtiga dhimashada. 
Muhiimaddu waxaa weeye, qeybiyo cibaadada, nolol iyo geeri kaliya Eebe, ka tago dhammaan noocyada ka buuxaan albaabbadii oo dhammu waa in la muquurtay karaa kuwa sanamyada, sidii horeba ku xusan aayadaha ama xadiis ku xusan.
Sidoo kale, in dulmar guud oo aad u kooban oo weynaanta tawxiid taas oo uu leeyahay awood aan caadi aheyn si ay u soo saarto dembiyadooda. Sidaa sababta ay dadku ma xiiseeyaan isticmaalka fursaddan? kuwaas oo ay toobad keenaan, tauhid soo laabtay iyo Daahiriyo tauhidi Eebe Subhanahu wa Jannatul? Maxaad Ha ka cabsan Eebe Subhanahu wa Jannatul?
Ma u baahan tahay aqoonsan qof kasta oo Banii'aadan, in mid ka mid ah maalin kasta oo keliya iman doonaa oo xisaabtami sharciga go'aan Most cadaalad Eebe, ka hor.
Oo mid walba oo iyaga ka mid ah soo iman doonaan inay Eebe kaliya on Maalinta Qiyaame. [Maryam / 19: 95]
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 07 / Year XV / 1432H / 2011. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]